Ameerikaan 'Fesbuukii dolaara biiliyoona 5 adabuufi' - BBC News Afaan Oromoo
Qaamoleen seeraa 'US regulators' dhaabbati Fesbuukii dolaara Ameerikaa biiliyoona 5 adabamuu akka qabu mirkaneessaniiru.
Murteen kun murteewwan maallaqaa biyyattiin hanga ammaatti murteessite keessaa isa guddaadha.
Adabbiin kun kan Fesbuukii irratti darbeef iccitii dhuunfaaf eegumsa gochuu dhabuu isaatiini.
Komishiniin Daldalaa Federaalaa Yunaayitid Isteet gorsaa dhimmoota siyaasaa kan ta'e Dhaabbata 'Cambridge Analytica' jedhamu odeeffannoo fayyadamtoota Fesbuukii miiliyoona 87 ta'an seeraan ala baasee itti fayyadameera jechuun qorannoo geggeessaa ture.
'Facebook' akkaawontii sobaa Afriikaarratti xiyyeeffatan uggure
Adabbiin kun Komishinii daldalaa kana keessatti sagalee caalmaadhaan mirkaanaa'eera.
Dhimma kanarratti Fesbuukiis ta'e Komishiniin Daldalaa Federaalaa US yaada kennuu didaniiru.
Komishiniin Daldalaa Federaalaa US Fesbuukii irratti qorannoo geggeessuu kan jalqabe bara darbe ji'a Bitootessaa keessa yoo ta'u Dhaabbati Gorsaa Dhimmoota Siyaasaa kan ta'e 'Cambrigde Analyitica' iccitii fayyadamtoota Fesbuukii kumaatamatti lakkaa'amanii seeraan ala baasee dhimma itti ba'aa akka ture adda baaseera.
Qorannoon kun kan irratti xiyyeeffate Fesbuukiin iccitii namoota dhuunfaa eeyyama malee dabarsee akka hin kennine walii galtee bara 2011 mallatteesse hojiirra oolchaa jiramoo hin jiru kan jedhu ture.
Keessa beektonni dhimma kanaa barruu 'Wallstreet' jedhamuuf yaada kennaniin Fesbuukiin doolaara biiliyoona 5 adabamuu ibsanii, ammas garuu dhimma kanarratti komshinaroota Rippaablikaanii fi Dimokiraatota ta'an gidduutti adda addummaan uumameera jedhan.
Murtee kana warri dimokiraatotaa mormanii rippaabilikaanonni deggeranis, kan hojiirra oolu garuu erga Biiroon Haqaa murtee dabarseen boodadha.
Kun garuu yeroo hagamii akka fudhatu wanti beekame hin jiru.
Feesbuukiin namoota eenyummaaa sobaatiin akkaawuntii banatan uggure